लाखे पुजाको प्रसाद खाए पछी बितण्डा भयो ( लाईभ भिडियो ) – Complete Nepali News Portal
लाखे पुजाको प्रसाद खाए पछी बितण्डा भयो ( लाईभ भिडियो )
August 22, 2017	470 Views
प्राचिन परम्परामा नुवाकोट धेरै अगाडी छ । त्यसैले कती पय ले नुवाकोट लाई दोश्रो काठमान्डौ भनेर पनि चिन्ने गरेका छन् । काठमान्डौ जिल्ला संग सिमाना जोडिएको जिल्ला धेरै पहिले राजा हरु बिच पनि निकै राम्रो सम्बन्ध रहिआएको इतिहासमा पढ्न पाईन्छ । बिभिन्न देवी देवालय हरुको पुजा तथा धार्मिक कार्यमा पनि निकै अगाडी छ नुवाकोट । यसैक्रममा देविको लाखे पुजा गर्ने क्रममा देबिको प्रसाद खाएपछी यस्तो बितन्डा भयो ।
नेपाली सेनाले यसरी बनाउँदैछ फास्ट ट्रयाक (स्थलगत भिडियो रिपोर्ट)
रबि लामिछाने भगवानका अवतार हुन् भन्दै प्रवास बाट आयो यस्तो भिडियो सहित !
नेपाली केटा केटि हरुको प्रेम दिवस (कमेडी भिडियो)
नेपालका मूर्तिहरु चोरी हुनुमा ठूलाबडाहरुको नै हात !को को हुन् मुर्ति चोर नेताहरु? (भिडियो सहित)
March 21, 2017	103,469